फेसबुकमा क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट र नोटिफिकेसन बन्द कसरी गर्ने ? (भिडियो सहित) – Nepali Tech Blog
योसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु तपाईले अंग्रेजीमा सजिलै पाउँनु हुन्छ । तर जानकारीहरु नेपालीमै भइदिए भनेर चाहनु हुनेहरुका लागि यो लेख तयार पार्दैछु । योसँगै यो लेख लेख्न उक्साउने साथीहरु ति पनि हुन् जो बेला बेला फेसबुकमा ‘आइन्दा क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट आयो भने सिधै ब्लक’, ‘क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट पठाउँनेहरु नर्कमा जाउन्’ भन्ने किसिमका स्टाटस लेख्छन् । खासमा क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट तपाईलाई किन आउँछ ? यसलाई बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? क्यान्डी क्रस जस्तै अरु गेमहरुको रिक्वेस्ट पनि कसरी बन्द गर्ने ? आदि बिषयमा म यो लेख तयार पार्दैछु । कृपया पुरा पढ्नु होला ।
क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट तपाईलाई किन आउँछ ?
पक्कै पनि क्यान्डी क्रसको रिक्वेस्ट सो खेल खेल्ने साथीहरुबाटै आउँछ । उनीहरुलाई अर्को माथीको लेभलमा पुग्न वा गेममा ‘लाइफ’ पाउँन साथीहरुको सहयोग चाहिने हुन्छ । नत्र धेरै समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ । यसैले साथीहरुलाई यो खेल खेलिदे वा लाइफ पठाइदे भनेर माग्ने हो । यसमा फेसबुक जोडिएको हुनाले त्यसले स्वत: फेसबुकका साथीहरुको लिस्ट निकालिदिन्छ र तिनै साथीहरुलाई रिक्वेस्ट पठाइन्छ ।
यसमा साथीहरु छानी छानी वा सबैलाई एकै पटक रिक्वेस्ट पठाउँने सुबिधा पनि हुन्छ । तर कसले छानी छानी पठाउँने झर्को गरिरहने । एकै पल्टमा सबैलाई हुन्डामुन्डा पठाइदियो, जसले रेस्पोन्स गरे पनि काम बनिगो ।
रिक्वर्स्ट आउँन बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
के को नमिल्नु, बकाइदा मिल्छ । खासमा फेसबुकमा उसका विज्ञापन बाहेक तपाईको टाइमलाइनमा के के हेर्ने अनि के के नहेर्ने भन्ने तपाईले छनौट गर्न पाउँनु हुन्छ । त्यही हो अलिकति टाइम दिएर सेटिङ मिलाउँनु पर्छ । धेरै साथी भएर टाइमलाइनमा चाहिने नचाहिने कुरा आएर दिक्क भए अनफ्रेन्ड नगरि तिनीहरुलाई अनफलो गर्दिने हो भने पनि यो समस्यादेखि केहि हदसम्म छुटकारा पाइन्छ ।
यस्तै गेमहरुको रिक्वेस्ट पनि तपाईले इच्छा अनुसार आउँने र नआउँने बनाउँन सक्नु हुन्छ । आएको नोटिफिकेसनमा कर्सर लैजानुहोस् । क्लिक गर्नु भन्दा पहिले सो नोटिफिकेसनको दायाँ पट्टि क्रस (X) चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् । अनि त्यस पछि खुल्ने डायलग बक्समा अफ वा स्टप मा क्लिक गरि बन्द गर्न सक्नु हुन्छ ।
रिक्वेस्ट पठाउँन बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन
एउटा उपाय खेल नखेल्ने, न रहे बाँस नबजे बाँसुरी । अर्को उपाय सो गेम खेल्नेहरुलाई मात्रै सेलेक्ट गरेर पठाउँने, ऐचोपैँचो चल्छ आनन्दै ।
क्यान्डी क्रस जस्तै अरु गेमहरुको रिक्वेस्ट पनि कसरी बन्द गर्ने ?
क्यान्डी क्रस बन्द गराए जस्तै अरु गेमको बन्द गराउँन सकिन्छ । सोही तरिका अपनाउँनु होला ।
कसरी गर्ने सजिलो तरिकाको लागि भिडियो हेर्नुहोस् ।
यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन्, सजग र सचेत हुनै पर्छ । तपाईका केहि समस्या भए तल कमेन्टमा लेखेर वा फेसबुकमा मलाई म्यासेज गरेर पनि भन्न सक्नु हुनेछ । म सोही बिषयमा यसरी नै लेख्ने र भिडियो बनाउँनेछु ।